China Jaw Crusher na-emepụta na ndị na-ebu ya | Onye na-eme brik
Igwe na-agba agba agba bụ ụdị extrusion a na-atụgharị. Workingkpụrụ ya na-arụ ọrụ bụ na moto ahụ na-eme ka eriri na pulley, na agba agba a na-ebugharị na-agbago na ala site na ntanetị.
Mgbe nkpuchi a na-akwagharị na-ebili, akụkụ dị n'etiti efere toggle na agba ahụ a na-akwagharị na-abawanye, si otú ahụ na-ebugharị efere a na-ebugharị ka ọ dị nso na efere agba ahụ, ma n'otu oge ahụ a na-akụ ma ọ bụ belata ihe iji mezuo nzube.
Nke a na usoro n'agba crusher na-bụ-eji maka ulo oru ndinuak na ezi ndinuak nke dị iche iche ike ores na nkume na ulo oru ndi dị ka brik na taịl nile, nkà mmụta banyere ígwè, Ngwuputa, Chemicals, ciment, ewu, refractories na ceramik.
Ọrụ Ngwa ihe n'iwepịa
Prinkpụrụ ọrụ Ndinuak
2050 × 2200 × 2400
2300 × 2200 × 2400
Mgbe moto ahụ na-agbagharị eriri eccentric site na belt ahụ, njikọ kwụ ọtọ na-agagharị na ala. Mgbe njikọ kwụ ọtọ dị n’elu, ọ na-eme ka brackets abụọ ahụ jiri nwayọ nwayọ. Ihe nkwado ahụ na-amanye efere agha a na-akwagharị ka ọ na-aga n'ihu na efere a na-edozi ya, na oghere na-akụda (oghere nke agba na-agba agba na-agbagọ) na-echi ọnụ site na ịpịpịa, nkewa na ịgha. Njikọ vetikal na-agbadata ala, efere toggle na efere agbụ a na-ebugharị ebugharị azụ site n'ike nke oge opupu ihe ubi na eriri eriri. N'oge nke a, a na-amụba oghere mmiri ore, wee si na ya wepụta ọlịla. Enwere ike ịhụ na agba na-agbaji ore na-agbaji ore oge niile. The eccentric aro naanị nwere ọkara okirikiri maka ndinuak kwa mgbanwe, na nke ikpeazụ ọkara okirikiri na-eji maka ore orùrù. Ya mere, jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-aga n'ihu ndinuak igwe, o nwere ibu ike oriri na ala n'ibu arụmọrụ.
a) Mgbu ndinuak uji eze na ọ dịghị nwụrụ anwụ mpaghara, melite nri ikike na mmepụta. Na elu ndinuak ruru na ikpeazụ ngwaahịa size bụ edo.
b) Ngwa gasket-ụdị ihapu oghere ukpụhọde ngwaọrụ bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi na-adaba adaba, ma nwee oke nhazi mgbanwe, nke na-eme ka mgbanwe nke akụrụngwa dịkwuo elu.
c) lubrication system dị mma ma nwee ntụkwasị obi, akụkụ dị mfe iji dochie anya, yana ndozi akụrụngwa dị mfe.
d) Akụrụngwa ike nchekwa: 15-30% nchekwa nchekwa maka otu igwe, karịa nchekwa nchekwa abụọ maka sistemụ.
e) Nnukwu usoro mgbanwe nke ọdụ ụgbọ mmiri, nwere ike izute ihe ndị ọrụ dị iche iche chọrọ.
f) Ọdịdị dị mfe, ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi na ụgwọ ọrụ dị ala. Obere mkpọtụ na obere ájá.
Nke gara aga: Gburugburu Stone mwepụ ala
Osote: Otu mkpokọta Robot brik Stacking System